मकै सुकाई राख्नु आमा, म स्कुलबाट फर्किएर चक्की जाउँला’ भनेर गएकी भागरथी अझै आईनन | Pahara Nepal
मकै सुकाई राख्नु आमा, म स्कुलबाट फर्किएर चक्की जाउँला’ भनेर गएकी भागरथी अझै आईनन
7th February 2021 , 5:43 PM
‘मकै सुकाई राख्नु आमा, म स्कुलबाट फर्किएर चक्की जाउँला’ भनेर गएकी भागरथी अझै आईनन । मकै सुकाई राख्नु आमा, म स्कुलबाट फर्किएर चक्की जाउँला’ यस्तै भनेर स्कुल गएकी थिईन बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका ७ चेडपानीकी भागरथी भट्ट । यही वाक्य उनले आफ्नी आमासगं बोलेको अन्तिम बाक्य हुन पुग्यो । गत बुधबार बिहान स्कुल गएकी भागरथी घर फर्किन पाईनन । आमाले सुकाएको मकै बोरामै थन्कियो ।
स्कुलको छुट्टी हुने बित्तिकै छोरी घर आउली र चक्की जालीन भन्ने सोचिकी थिईन आमाले तर भागरती आईनन । केही समय अगाडी मात्रै पती गुमाएकी भागरतीकी आमाले सेतो कपडामा बुधबार साझँसम्म पनी छोरी आउने आशामा भागरथीको बाटो हेरिरहेकी थिईन । तर भागरथीसगंैका साथीहरु सबै घर फर्किए, हेर्दा हेर्दे डाडा माथिको घाम अस्तायो, एक्कै छिनमा क्षितिज पारी देखिएको सुर्य पनी अस्तायो अनि झमक्कै रात प¥यो, चारै तिर अन्धकार भयो तर भागरथी फर्किएर घर आईनन ।
अबेरसम्म भागरथी घर नआए पछि सोधखोजको काम चल्यो तर कतै भेटिईनन भागरथी । परिवारले अड्कल काट्न थाले कतै पाईल पो गईकी ? जवान भएकी छोरी पाईन जान पनि सक्छे भन्ने आफ्न्तको अनुमान पनी गलत थिईन । सबै तिर तलासी गर्न थालियो । बिहिबार प्रहरीकोमा उजुरी पनी गरियो । सबै तिर उथल फुथल र हल्ला खल्ला भयो । भागरथी हराएको खबर गाउँभरि फैलियो ।यतिबेला सम्म पनि भागरथी जिउदै होलीन भन्ने आशा सबैको मनमा थियो । तर त्यो आशा एक्कै छिनमा निराशामा परिणत भयो । बिहिबार भागरथी भेटिईन तर सधंैका लागी आखा बन्द गरेको अबस्थामा ।
घर नजिकैको लबलेक भन्ने स्थानमा भागरथी मृत अस्थामा फेला परीकी थिईन । सायद घर पुगेर चक्की जाने हतारमा हुदी हुन भागरथी ? तर दुष्ट पापीहरुले उनलाई घर पुग्नै दिएनन । मृतक भागरथीका आमा अहिले चिच्याई रहेकी छिन । “छोरी ‘मकै सुकाई राख्नु आमा, म स्कुलबाट फर्किएर चक्की जाउँला’ भनेकी थियौ । आज ५ दिन भैसक्यो छोरी तिमि किन आउदैनौ ? मैलैे मकै सुकाएर बोरामा हालीकी छु । आउ छोरी चक्की जाउ । तिमी कहिले आउछौ छोरी ? छिट्टो आए ”। यस्तै यस्तै भनेर र्बबराई रहेकी छिन । बिचरी , भागरथीका आमा ।
भागरथीको बलत्कार पछि हत्या भएका आंसकामा प्रहरीले बिहिबार देखि नै अनुसन्धन गरीरहेको छ । उसो त शबको प्रकृति हेर्दा बलात्कार पछि हत्या भएको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रहरी प्रमुख, प्रहरी नायब उपरीक्ष नारायण प्रसाद अधिकारी , सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयलका एसएसपी जनकराज पाण्डे , केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरोको टोली जुटेको छ ।
तर अहिलेसम्म हत्यारा पत्ता लाग्न सकेको छैन । प्रहरीले अहिलेसम्म सार्वजनिक गर्नै पर्ने खालको प्रगति भने गर्न सकेको छैन । भागरथीको न्यायको माग गर्दै जिल्लाका बिभिन्न ठाउँहरुमा प्रर्दशन जारी रहेका छन । कतै यो घटना पनी निर्मला पन्त हत्या काण्ड जस्तै हुने होकी भन्दै आसंका ब्यक्त हुन थालेको छ ।
यसका लेखक सञ्चारकर्मी जनक साउँद हुन । उनी रेडियो बैतडी, बैतडीमा कार्यरत छन ।